SIDEE LOOLA JEEDAA UKUMAHA KULEYLIYAHA, INTA JEER EE AAD SOO NOQOTID, SIDA LOOLA MACAAMILI KARO GACMAHAAGA - KUFSI
Ku dhajinta ukun ee kulul, aqal kasta wuxuu doonayaa inuu helo digaag caafimaad leh oo digaag ah. Laakiin tani maaha mid ku filan inaad iibsato ama ku samayso kulul wacan oo leh gacmahaaga, qalabeysan oo kuleylka lagama maarmaanka ah, qaboojinta, nadaafada iyo nidamka hawada. Waxay soo baxday in ay ukumo u baahan tahay in ay fiirsato maalin kasta, ama halkii ay u rogaan. Xaddiga rabshadaha maalinlaha ah waxay ku xiran tahay maalinta la dhigo iyo nooca shimbirta. Waxaan ka wada hadli doonaa sababta ay taasi u dhacayso, inta jeer iyo sida loo dhiso qaab dhisme guri.
Waa maxay sababta ay ukumaha u soo noqnoqonayaan
Hatcher, ayaa sida caadiga ah, beddesho hen ah si loo helo chicks badan sida ugu macquulsan. Si loo hawlgalo si guul leh, qalabka kulka ee qalabka waa inuu ku jiraa xaalado isku mid ah sida digaagga hoostiisa. Sidaa darteed, waxay haysaa heerkulka isku midka ah. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in ukunta u soo jeestay, sababtoo ah sidaas sidaas hooyada baaluqa.
Waxaan kugula talinaynaa beeraleyda digaaga in ay tixgeliyaan dhamaan faahfaahinta ah in ay kobcinayaan ukumaha gacmahooda, gaar ahaan qaboojiyaha.
Shimbirku wuxuu u nugul yahay, ma garanayo dhammaan geeddi-socodka ku dhaca gudaha qolka. Beeraleyga digaaga ayaa u baahan inuu fahmo tan si uu u siiyo ukumo ku dhejisid kiniinkiisa iyadoo shuruudaha ugu dhow ee suurtogalka ah ee dabiiciga ah.
Sababaha looga dhalan karo ukunta:
kuleylka dharka ee ukunta ee dhammaan dhinacyada, kuwaas oo ka qaybqaata muuqaalka xilliga ugu habboon ee digaag caafimaad qaba;
ka hortagga embriyaha in ay ku dhuuntaan qolofka iyo xajinta xubnaha ururadooda;
Isticmaalka ugu wanaagsan ee borotiinka, si markaa embriyaha uu caadi ahaan u koro;
ka hor dhalashada, shimbirta ilmaha ayaa qaadata booska saxda ah;
Maqnaanshaha leexashada waxay horseedi kartaa geerida dhammaan cayayaanka.
Ma taqaanaa? OhQeybta hoose ee digaagga waxay qaadan kartaa 250-300 ukumood sanadkiiba.
Immisa jeer ayaad ukunsataa
Isku-xirka is-goysyada ee is-gooyska ah waxaa jira shaqeyn isbedel. Qalabka noocan oo kale ah wuxuu tikidhada badan u dhaqaaqi karaa (10-12 jeer maalintii). Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad doorato habka ku habboon. Haddii qalab soo noqnoqonaya maqan yahay, markaa waxaad u baahan tahay inaad gacanta ku samayso. Waxaa jira jajabiyayaal jacayl ah oo sheeganaya in xitaa aan dib loo soo celin, waxaad heli kartaa boqolkiiba fiicnaan ee cidla ah. Laakiin haddii leefku leeyahay dareenka si ay u soo jiidato chicks in khadka badanaa iyo maalin kasta, waxaa loola jeedaa in ay lagama maarmaan tahay. Haddii aanad ku dhejin kumbuyuutar, waa inaad ku tiirsanaataa keli ah keliya: waxaa laga yaabaa inay noqon doonto, ama aan dhici karin.
Waxay u badan tahay inay adiga waxtar kuu leedahay si aad u ogaatid sida loo xakamaynayo qoyaanka ku jira maskaxda, sida iyo waxa la nadiifiyo qoboobaha ka hor inta aan la dhigin ukumaha, iyo sidoo kale heerkulka waa inuu ku jiraa kuleylaha.
Tirada ukunta maalinlaha ah waxay ku xiran tahay maalinta ay ku jiraan saxanka iyo nooca shimbirta. Waxaa la rumeysan yahay in baaxada weyn ee ukunta, marar badan waxaad u baahan tahay inaad iyaga leexiso.
Khubarada ayaa ku talinaya in ay soo noqdaan laba jeer oo kaliya maalinta ugu horreysa: subaxda iyo fiidkii. Marka xigta waxaad u baahan tahay inaad kordhiso tirada soo noqoshada ilaa 4-6 jeer. Qaar ka mid ah guryaha digaaga ayaa ka baxaya 2-jibbaar. Haddii aad soo noqotid marar badan laba goor iyo wax ka badan 6 jeer, lafuhu way dhiman karaan: iyadoo marmar dhif ah, embriyaha waxay ku dhegsan tahay qolofka, iyo mararka badana, waa la qaboojin karaa. Waxaa ugu wanaagsan in la isku daro marinka hawada. Heerkulka qolka waa inuusan ka yarayn 22-25 ° C. Habeenkii uma baahna nidaamkan.
Ma taqaanaa? Roodhiga ukumaha badanaa wuxuu badiyaa ukunta ilaa 50 jeer maalintii.
Si aan loo jahwareerin oo aan loo dhicin nidaamka, dad badan oo beeraleyda digaaga ah waxay isku dayaan in ay kaydiyaan qorax ay ku qoraan wakhtiga soo noqoshada, dhinaca ukunta (dhinacyada iska soo horjeeda waxaa lagu calaamadeeyaa calaamadaha), heerkulka iyo qoyaanka kuleylaha. Waxaan ku dhejin karnaa kaluunka Xaaladaha ugu wanaagsan ee miisaanka looxyo ee ukunta ee shimbiraha kala duwan
Maalinta Weli Joogitaanka isbeddelka Heerkulka, ° Iyadoo Qoyaan,% Cabbitaanka, hal mar maalintii
1-11 4 37,9 66 -
20-21 - 37,0 66 2
16-17 - 37,2 47 -
18-19 - 37,0 80 -
1-8 - 38,0 70 -
25-28 - 37,0 70 1
25-27 - 37,2 57 1
25-28 - 37,0 58 1
1-6 4 37,8 56 -
27-28 - 37,0 70 1
Noocyada kala duwan ee hababka wareega
Kombiyuutarada waa kuwo si toos ah iyo farsamo ahaan. Marka ugu horreysa ee waqtiga iyo dadaalkaba, laakiin "ku dhufo" awood. Dhamaadkani waa doorasho ka jaban. Iyo qaaliyadaha qaaliga ah, iyo qaababka qiimaha jaban ee lagu beddelayo waxay noqon kartaa laba nooc oo keliya: midabka iyo jilicsanaanta. Markaad bartay sida ay u shaqeeyaan, waxaad ku dhisi kartaa qalab la mid ah gacmahaaga.
Waa muhiim! Laguma talin in la dhigo ukumaha noocyada kala duwan ee shimbiraha ee hal tab: habka heerkulka iyo waqtiga qaboojinta waa ka duwan yahay.
Mabda'a shaqada: qaab khaas ah ayaa riixaya ukumaha, waxay bilaabaan inay ku duubaan dusha, taasoo joojisa iyaga. Sidaa awgeed, ukumuhu waxay leeyihiin waqti ay ku wareegaan xarkiisa. Farsamadan waxaa loo qaabeeyey oo kaliya xarfaha yaryar. Faa'iidooyinka:
fududaynta maamulka iyo shaqeynta;
maaddada ayaa la dhigaa oo keliya qaabkeeda saafiga ah, maadaama ay wasakhdu ka hortagtay inay noqoto;
wareega wareega ah waxaa loogu talagalay oo keliya dhexroor gaar ah oo ukunta ah, sababtoo ah kala duwanaansho la'aanta u dhaxaysa xajmiga ukumaha aan si buuxda loo beddelin;
haddii jirku uu aad u hooseeyo, waxay garaacaan midba midka kale, waxyeelada qolofka.
Mabda'a hawlgalku waa qulqulo, saarista maaddada ku jirta baakidhka ayaa ah mid toos ah. Dheefaha:
universality: alaab ka mid ah dhexroor kasta waxaa lagu dhajiyaa, ma saameynayso xagasha wareega ee gawaarida;
Badbaadada: waxa ku jira baayacmushtarrada marka daloolka uusan taaban mid kale, sidaas darteed, iyada oo aan waxyeello lahayn.
Isticmaalka awoodda sare;
Qiimaha sare ee aaladaha isdaba joogga ah.
Akhri faahfaahinta iyo natiijooyinka isticmaalka ukumaha noocaas ah ee ukumaha ah ee ukunta sida Stimul-4000, Egger 264, Kvochka, Nest 200, Universal-55, Sovatutto 24, IFH 1000 iyo Stimulus IP-16 ".
Sida loola shaqeeyo loola macaamilo gacmahaaga
Haddii ay tahay mid sahlan in la isku xiro xero-qaboojinta qalabka wax lagu duubo (kuraasta qoryaha, sanduuqyada xayawaanka, xakameeyaha roogga ah iyo xumbada leh polystyrene), ka dibna way adag tahay in la dhiso ukun toos ah. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay ugu yaraan wax yar oo aad fahamtid farsamooyinka iyo injineernimada korontada. Waxyaabaha ugu muhiimsan - si aad u fahamto mabda'a hawlgalka qalabkan oo si cad u hoggaansamaya sawirka.
Si aad u dhisto qashin yar yar, waxaad u baahan tahay inaad iibsato qaybo diyaar ah, alaabta la isticmaalo ama adiga nafsadaada:
kiiska (sanduuq alwaax ah oo lagu diiriyo by polyfoam);
saxaarada (mesh bir ah oo ku xiran dhinacyada alwaaxda, iyo qaab-dhismeed alwaax ah oo leh dhinacyo xaddidan, masaafada u dhaxaysa dhexdhexaadinta ukunta);
kuleylka kuleylka (2 nalalka dhaadheer 25-40 W);
taageere (ku haboon kombuyuutarka);
is beddelka habka.
Akhri dhammaan wixii ku saabsan dabeecadaha sii kordhaya ee goslings, ducklings, turkiga, quail, poults iyo digaagga ee kiniisada.
Halabuurka ee rotator automatic ah:
mashiinka tamarta yar oo leh dallado badan, oo leh saamiyo kala duwan;
birta birta ah ee ku dheggan qaabka iyo mootada;
riix si aad u jeediso mishiinka banaanka.
Marxaladaha ugu muhiimsan ee dhismaha
Marka kiniisaddu diyaar u tahay, waa waqtigii la ururin lahaa iyo nidaaminta:
On qorshe ah alwaax kala duwan ku xiran dhammaan qaybaha ee farsamda.
Dhamaadka bilaashka ah ee barafku wuxuu ku xiran yahay qaabka si marka gawaarida loo soo jeesto, waxay u socotaa horey iyo gadaal.
Waqtigu wuxuu ku xiran yahay mishiinka iyo furaha, iyo fiilada ayaa la soo bixiyay (waxaa suurtagal ah in laga helo daloolka gaarka ah ee sanduuqa).
Waa muhiim! Naqshad kasta oo cusub waxay u baahan tahay in la imtixaamo, gaar ahaan iskaa wax u qabso. Beeralayda digaagga ee khibrad leh waxay ku talinayaan in ay baaritaan ku sameeyaan xashiishka ilaa dhowr maalmood kahor. Tani waxay lagama maarmaan tahay in la hubiyo in qaababka habboon ay sax yihiin iyo in la tirtiro qaladaadka suurtagalka ah.
Iyadoo dhismaha habboon, mabaadiida soo socota ayaa la raacayaa:
farsamada qalabka ayaa lagu dhaqaajiyaa, taas oo u beddesha dhaqdhaqaaqa wareegga wareegga wareegga isdhaafka jejebka;
iyada oo loo mahadcelinayo nidaamka qalabka, isbedelada badan ee rotor si degdeg ah u turjumaya gaabis gaabis ah ee qalabkii ugu dambeeyey, muddada wareegtada waxay u dhigantaa uurku u dhexeeya ukumaha ukunta (4 saacadood);
waa in asliga ah waa inuu u guuraa xadka masaafada u dhaxeysa dhexroorta ukunta, taas oo u oggolaanaysa inay ku soo rogaan 180 ° hal dhinac.
Sidee ayuu u shaqeynayaa
Mihnadu waxay u shaqaysaa sida soo socota:
Gawaadhida gawaadhida ayaa ku wareegaya xawaare sare.
Nidaamka dalladda ayaa hoos u dhigaya wareegga.
Udubka ku xiran qaabka leh qalabka ugu dambeeya wuxuu isbeddelayaa dhaqdhaqaaqa wareega ah ee isdhaafsiga.
Qaabku wuxuu u guuraa diyaarad u eg.
Marka uu dhaqaaqo, muraayaddu waxay dusha sare udhigeysaa waxyaabaha ku jira saxanka 180 ° iyadoo wareega ah 4 saacadood.
Baro sida aad naftaada u samayn lahayd: nafsoolitiriga, hygrometeriga iyo hawo qaboojinta ee kululaynta.
Inkasta oo qaabdhismeedka maskaxeed uu leeyahay qaab aad u fudud, oo ay ugu mahadcelinayaan otomaatigga, waxay si weyn u badbaadineysaa wakhti, taas oo aan la isticmaalin marka ay soo rogeyso qalabka. Nidaamka iskiis u shaqeeya wuxuu sidoo kale u oggol yahay in la keydsado khayraadka maaddada oo lagu iibsan karo qalab cusub oo qalabaysan, iyo habka soo jeestay wuxuu caawiyaa helitaanka digaag badan oo ah digaagga beerta.